लाभांशहरूको सामना गर्न तपाईं के रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? | अर्थव्यवस्था वित्त
लाभांशहरूको सामना गर्न तपाईं के रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
लाभांश एक भुक्तानी हो जुन कम्पनीहरूले उनीहरूको सेयर होल्डरलाई उनीहरूको व्यवसायिक लाइनहरू द्वारा उत्पन्न मुनाफाको एक परिणामको रूपमा दिन्छ। यो पनि एउटा भेरिएबल हो जसमा हजारौं र हजारौं लगानीकर्ता आफ्नो लगानी पोर्टफोलियो बनाउनको लागि हेर्छन्। यो किनभने एक प्रदर्शन प्रस्ताव छ जुन%% देखि%% सम्म छ। तर तपाईको दृष्टिकोणका लागि सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा के हो भने ईक्विटी बजारमा सूचीबद्ध भएका केही कम्पनीहरूले प्रदान गरेको भुक्तानीबाट फाइदाको लागि तपाईं विभिन्न रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। निश्चित रूपमा तपाईलाई अबदेखि यिनीहरूलाई अभ्यासमा राख्नको लागि जान्न चाहानुहुन्छ।
एक रणनीतिहरू सेभरहरू द्वारा प्राथमिकता लाभांश मार्फत गठन गर्नु भनेको भ्यारीएबल भित्र निश्चित आय। शेयर बजार मा यसको सूचीबद्धको बावजुद। तपाईंलाई प्रस्ताव गर्नेछ मुख्य बैंकि products उत्पादनहरूबाट उत्पादित भन्दा बढी नाफा (समय निक्षेप, सशुल्क खाता, प्रोमिसरी नोटहरू, आदि।) यी बचत मोडलहरू प्रदर्शनमा कम नै ०.0,50०% भन्दा बढी छ। थप रूपमा, लाभांश मार्फत तपाईंसँग प्रत्येक वर्ष निश्चित र ग्यारेन्टी आय हुन्छ। तपाईंको जाँच खाताको तरलता कायम गर्न मद्दत गर्दै, अन्य विचारहरूको माथि।
यी नियमित भुक्तानीहरूको साथ तपाईसँग गर्न सक्ने ब्यवहारको अर्को कुरा यो हो कि उनीहरूको सेयरहरू भुक्तान हुन अघि दिनहरूमा अनुभव हुने जोखिमहरूको फाइदा लिनु हो। लगानीबाट छुटकारा पाउन। यो एक अधिक परिष्कृत रणनीति हो जुन वित्तीय बजारमा अधिक अनुभवको साथ लगानीकर्ताहरूद्वारा केही आवृत्तिको साथ प्रयोग गरिन्छ। उनीहरूले यो प्रदर्शनको खोजी गरिरहेका छैनन्, तर तिनीहरू के चाहान्छन् उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा लाभदायक बनाउनु हो। यस पारिश्रमिकमा पनि जुन उनीहरू हकदार छन् तर कुनै पनि समय व्यायाम नगर्नुहोस्।
1 लाभांश: चलमा निश्चित आय
2 तेजी प्रक्रियामा
3 धेरै ठोस मान
4 प्रदर्शनमा खस्छ
5 लगानीकर्ताले के गर्न सक्दछन्?
6 लाभांश-सम्बन्धित कोष
लाभांश: चलमा निश्चित आय
अर्को प्रकार जुन तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अधिक क्लासिक। समावेश गर्दछ मूल्यहरू उनीहरूको अघिल्लो तहहरूमा फर्कनको लागि कुर्नुहोस्, एक पटक लाभांश भुक्तानी बाट छुट। यो हुन केही हप्ता लाग्नेछ। तर कुनै पनि मामला मा तपाईं लाभांश उपज को लाभ संग आफ्नो सेयर मात्र बेच्नुहुन्छ। भन्नुपर्दा, तपाईंले गरेको प्रत्यक्ष लगानीमा तपाईंले कुनै नाफा प्राप्त गर्नुहुनेछैन। यो एक सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका हो जुन तपाईले यस पारिश्रमिकको भुक्तानी अनुकूलन गर्नु पर्छ जुन इक्विटीहरूले तपाईलाई प्रदान गर्छन्। यद्यपि यो शुद्ध र साधारण लगानी के हो के गर्न को लागी धेरै छैन।
केही वर्षको लागि लाभांश को भुक्तान अब तपाइँलाई दुई विकल्प अनुमति दिन्छ। एकातिर, सीधा तिनीहरूलाई चार्ज गर्नुहोस् र ती तपाइँको जाँच खातामा जान्छ ताकि तपाइँ उनीहरूसँग के चाहानुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तर्फ, सम्भावना ती कार्यहरूमा पुन: लगानी गर्न सक्षम हुने सम्भावना जहाँ तपाईंले स्थिति लिनुभयो। यो एक धेरै व्यक्तिगत निर्णय हुनेछ जुन तपाइँले वास्तवमै के चाहानुहुन्छ र तपाइँले प्रस्तुत गरेको सानो लगानीकर्ताको प्रोफाइल के हो भनेर विश्लेषण पछि गर्नुपर्नेछ।
जे भए पनि तपाईलाई यो जान्न सजिलो हुन्छ कि कुन परिदृश्यहरू हुन् जहाँ तपाईं यस सदस्यतालाई लगानी गर्न सबै अनुकूल छ सबै शेयरधारकहरू प्राप्त गर्छन्। को लागि एक रणनीति को रूप मा तपाईंको सेकुरिटी खाताको स्थिति सुधार गर्नुहोस्। अचम्म मान्नुपर्दैन, तपाईं मार्जिन सुधार गर्न सक्नुहुन्छ जुन बैंकले तपाईंलाई लाभांशको लागि प्रदान गर्दछ। ध्यान दिनुहोस् किनकि जब यो लगानीको परिदृश्य तपाईंलाई आउँदो हुन्छ यो रोचक हुन सक्छ।
जब एक स्टक एक माथिका प्रक्रिया अनुभव गर्दैछ, तपाईंले लाभांशको भुक्तानी पुनर्निर्माण गर्नु पर्छ। कारण किनकि यी अपरेशन्सको लागि धन्यवाद तपाईंसँग बढी सेयर हुनेछ, र यसैले अधिक उत्पादनहरू बढ्ने सम्भावनाहरू छन्। तपाईको तरलताको आनन्द लिनुको सट्टा। यो लामो समयको लागि पैसा स्थिरको कुरा हुनेछ। इक्विटी प्रदर्शनमा सुधारको सट्टामा।
दीर्घकालीन बचत बैग: यदि तपाईंको लगानी मध्यम वा दीर्घकालीनका लागि हो भने, यो आन्दोलन पनि लाभदायक हुनेछ। न केवल यसले तपाईंलाई तपाईंको लगानी बढाउन अनुमति दिनेछ, तर तपाईं अर्को लाभांशमा बढी पैसा स to्कलन गर्ने स्थितिमा पनि हुनुहुनेछ। यसैले, तपाईं आफ्नो निवेश पूंजी अलि अलि बढाउनुहुनेछ। यो अर्को केहि बर्षको लागि बचत ब्याग सिर्जना गर्ने धेरै नै मौलिक तरीका हो। अचम्म मान्नुपर्दैन, तपाईंको दृष्टिकोण धेरै वर्षहरूमा लक्षित छ, वंशानुगत लगानीको रूपमा पनि। यो एक उत्कृष्ट अवसर हुन सक्छ शेयर बजार मा तपाईंको स्थिति उठाउनको लागि।
धेरै ठोस मान
अर्को रणनीति एकदम स्थिर मूल्यहरूमा विकास गर्न सकिन्छ जुन शेयर बजारमा विरलै महत्त्वेपूर्ण खण्डमा ग्रस्त हुन्छ। लगानीमा लाभांश एकीकृत गर्न सार्थक हुनेछ तिनीहरूलाई तुरून्त स collecting्कलन नगरी। विशेष गरी यदि तपाईंलाई त्यो पैसाको आवश्यकता पर्दैन भने धेरै समय सम्म। जे भए पनि तपाईसँग इक्विटीमा नजिकका स्थानहरूको समयसीमा विचार गर्ने बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। बजार मा कुनै गिरावट आन्दोलन रोक्न को लागी यी लाभ को एक हिस्सा वाष्पीकरण गर्न को लागी लगानी को अतिरिक्त।
जे भए पनि, यस वर्ष हुने शेयरधारकहरू बीच लाभांश वितरण यस वर्ष इक्विटीमा प्रवेश गर्न अर्को प्रोत्साहन हुने छ। किनभने वास्तवमा, यसले वाचकहरूको लागि राम्रो समाचारको व्यायाम हुने प्रतिज्ञा गर्दछ। यद्यपि लगानीकर्ताहरूको लागि यो पारिश्रमिक घटाउनको रूपमा केही अन्य निराशाको साथ।
यस परिदृश्यबाट, सूचीबद्ध कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको मुख्य उपन्यासहरू समावेश गर्दछ जुन तिनीहरूले उत्पन्न गर्ने फिर्ताको क मा परिमाण छ औसत नाफा 4% को नजिक। जे भए पनि, केहि दशौं तल जुन गत वर्षको उत्पादन गर्‍यो र जसले प्रदर्शनको सर्तमा एक उत्तम रेकर्ड मार्क गर्‍यो। जे भए पनि, यो उल्लेखनीय नियमिततामा चल्दै छ। धेरै आश्चर्य बिना र राशिमा यो स्थिरताको साथ जुन साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूको बचत खातामा जान्छ।
लाभांशको विकास बारे सचेत रहेका सेभरहरूको लागि यो सबै शुभ समाचार होइन। किनभने त्यहाँ केही कम्पनीहरू छन् जसले उनीहरूको रकम घटाए। यो एक अग्रणी स्पेनिश इक्विटीको विशिष्ट मामला हो: Telefónica। किनकि राष्ट्रिय अपरेटरले यस बर्षमा शेयरधारकहरूलाई दिने अनुदान भुक्तानी घटाउने निर्णय गरेको छ। २०१ it को ०.2017 युरोको तुलनामा २०१ it खाताको शुल्कमा ०.0,40० युरोको शुद्ध लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेदेखि (२०१ in जुन ०.0,55 युरो वितरण हुने अपेक्षा गरिएको थियो)। यो निश्चित रूपमा साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूको पक्षमा समाचार होईन। तर यसको उल्टो, किनकि तिनीहरू तुलनात्मक स्थितिबाट टाढा रहेका छन्, कम्तिमा छोटो अवधिमा।
राष्ट्रिय निरन्तर बजारमा सूचीबद्ध अन्य कम्पनीहरूले आधारित रणनीतिमा आधारित छन यी भुक्तानीहरूको कन्ट्यामेन्ट। यद्यपि केहि प्रतिशत अन्तर्गत जुन धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्। प्रति शेयर उत्पादनमा कटौतीको साथ जुन कुनै पनि अवस्थामा १०% को स्तर भन्दा बढी हुँदैन। तर त्यसले कुनै पनि केसमा लगानीकर्तालाई यी कुनै पनि स्पेनिश इक्विटीमा पद लिन रोक्दछ। यसको विपरीत जो यस वितरणलाई बढी मनपर्दछ।
लगानीकर्ताले के गर्न सक्दछन्?
यस नयाँ वर्षको लागि लाभांश द्वारा प्रस्तुत स्थितिलाई ध्यानमा राखेर, त्यहाँ धेरै रणनीतिहरू छन् कि बचत गरिएको बचतको मूल्यलाई अनुकूलित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै आक्रामक अपरेशनबाट अरूमा धेरै रक्षात्मक अर्थको साथ लगानी भएको पूंजीको रक्षा गर्नुहोस्। ती मध्ये, सामान्य भन्दा चाँडो आन्दोलनको प्रबर्धनको विकल्प बाहिर खडा छ। धेरै स्पष्ट र परिभाषित उद्देश्यको साथ। यो पारिश्रमिकको संयोजनको साथ उनीहरूको मूल्यमा उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त गर्न खोज्नु बाहेक अरु कुनै होइन। मध्यम र लामो अवधिको लागि लक्षित डेन्सर अवधिहरूलाई लक्षित बिना।
अर्को विकल्प जुन तपाईंसँग यस समयमा आउँदछ कम स्थिर स्थिति। जहाँ तपाईंको रणनीतिले सिक्युरिटीहरूको लागि छनौट गर्नु समावेश गर्दछ जसले राम्रो लाभांश उपज प्रस्तुत गर्दछ र फलस्वरूप एक त्रुटिहीन टेक्निकल पक्ष देखाउँदछ, वा कमसेकम बढी वा कम स्पष्ट अप्ट्रेंडको साथ। त्यसोभए यस प्रकारले, तिनीहरू अहिलेको खुला स्थानहरूबाट अधिक लाभ लिनको लागि सर्तको स्थितिमा छन्।
तपाईंको कार्यहरूको तेस्रो अबको भन्दा धेरै अधिक विविध लगानी बनाउनको उद्देश्य हो। कसरी? ठीक छ, धेरै सरल, एक को लागी लगानी कोष त्यो यी सुविधाहरूको वित्तीय सम्पत्तिमा आधारित छ। तपाईंसँग धेरै प्रस्ताव छन् जहाँ तपाईं आफ्नो मनपर्ने कोषहरू राष्ट्रिय बजार र अन्य भौगोलिक क्षेत्रका दुबैमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा प्रोफाइलमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईं साना र मध्यम लगानीकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।
किनभने प्रभाव मा, त्यहाँ यी वित्तीय उत्पादहरु को एक संख्या हो कि यी मूल्यहरु को समावेश मा आफ्नो रणनीति आधार। विश्वव्यापी, एकल कम्पनी छनौट बिना। बरु, यसले स्टकको अत्यधिक विविध टोकरीमा लगानी गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यो एक विकल्प हो कि तपाईंसँग हात छ यदि तपाईं आफ्नो मौद्रिक योगदानको लागि अधिक सुरक्षा चाहनुहुन्छ भने।
मुख्य कमजोरी तपाईले यस लगानी विकल्पको फाइदा लिनको लागि हो कि तपाईले वित्तीय बजारमा प्रत्यक्ष खरीद र सेयरको बिक्रीको तुलनामा अधिक विस्तारित कमिशनहरू लिन पर्छ। २ प्रतिशतमा बढ्न सक्ने प्रतिशतको साथ। जुन केसमा तपाईले यी रकमहरू भाडामा लिनको लागि अझ ठूलो आर्थिक समर्पण गर्नुपर्नेछ। यद्यपि बदलामा, तपाईंसँग कुनै पनि प्रकारको जरिवाना बिना अन्य लगानी कोषहरूमा यसलाई स्थानान्तरण गर्न अझ ठूलो स्वतन्त्रता हुनेछ। थप रूपमा, यी अपरेशनहरू कुनै पनि समयमा औपचारिक गर्न सकिन्छ र आन्दोलनमा कुनै सीमा छैन। जबसम्म कोच बैंकबाट आउँछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » लाभांशहरूको सामना गर्न तपाईं के रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
कसरी लगानी आंकडा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?